Al-Shabaab oo weeraray saldhig booliska Kenya ku leeyihiin degmada Gaarisa - BBC News Somali
Al-Shabaab oo weeraray saldhig booliska Kenya ku leeyihiin degmada Gaarisa
22 Juunyo 2019
Booliska Kenya ayaa sheegay in saddex nin oo la tuhunsanyahay in ay yihiin mitidiinta Al-Shabaab la dilay kadib markii ay weerareen saldhig boolis oo ku yaal degmada Gaarisa ee bariga Kenya ku taal oo u dhow xadka Soomaaliya.
Warbixinta boolisku waxa kale oo ay sheegtay in dagaalyahannadii kale boolisku eryadeen.
Ugu yaraan sideed askari oo ka tirsan booliska Kenya ayaa todobaadkii hore lagu dilay weerar Al-Shabaab ku qaaday bariga degmada Wajeer.
Mitidiinta Al-Shabaab waxay muddo dagaal kula jireen dawladda Soomaaliya oo ay doonayaan in ay ridaan.
Waa kuwama "Macawisleyda" dagaalka kula jirta Al Shabaab?
Al-Shabaab oo sheegatay masuuliyadda qarax ka dhacay Kenya
Ururkan Al-Qaacida xidhiidhka la lihi wuxu Kenya ka fuliyey af-duubyo iyo weerarro, waxaanu wacad ku maray inuu Kenya kaga aar gudanayo ka mid noqoshada ciidamada Amisom, oo ah ciidamo xoogoodu yahay 20,000 askari oo ka socda Midowga Afrika oo taageera xukuumadda Soomaaliya.
Weerarkaa la qaaday habeennimadii Jimcuhu wuxu ka dhacay xero booliska ilaalada xuduudku ku leeyihiin Yumbis oo ka tirsan Faafi, laakiin boolisku wuxu sheegay in aan khasaare weyni gaadhin ciidamada nabadgelyada.
Miditiintu waxay wax yeeleen bir dheer oo lalis ah oo ay leedahay shirkadaha isgaadhsiinta midkood, waxaanay taasi kalliftay in xidhiidhku ka go' aaggaas, sida uu ku waramay wargeyska The Star.
Waxa boolisku sheegay in hurin ka tirsan ciidamada nabadgelyadu ku raad joogaan dableydii weerarka ahayd ee baxsatay.